Muqdisho;-Shirkii Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayay maanta ku gor feeyay dib-u-habaynta maamulka maaliyadda, waxayna asnixiyeen magacaabista taliyayaha Nabad Sugida Qaranka Jen. Bashiir Maxamed Jaamac iyo Taliyada Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen. Cabidxakin Daahir Saciid “Saacid”.
“Waa labo Jeneraal oo dalka laga yaqaan, aad baana Soomaalinimadooda, aqoontooda iyo hawl karnimadooda ugu kalsoonahay, waxaana ku kalsoonahay inay horseedi doonaan isbadal iyo horukac dhanka amniga dalka laga gaaro,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu. Dhanka kale goluhu wuxuu si buuxda isugu raacay barnaamijka dib-u-habaynta maamulka maaliyadda – DMM ee loo yaqaan (Public Financial Management – PFM) oo ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyaddu. Barnaamijkan ayaa lagu nidaaminayaa laguna xakamaynayo maamulka dhaqaale ee dalka afarta sano ee soo socota. Waxaana fulintiisa waxaa ku baxaysa 26 milyan oo Dooolar.